सरकार किन लुकाउन चाहन्छ न्यायको माग गरिएको यो पोष्टर ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सरकार किन लुकाउन चाहन्छ न्यायको माग गरिएको यो पोष्टर ?
काठमाडौं । फेसबुकमा जोडिएको एउटा अनौपचारिक समूह ‘एक रुपैयाँ देउ टोली’लाई आएको एउटा फेसबुक म्यासेजबाट सुरु भएको निर्मला पन्तको पोष्टर एक हप्ता पुग्दा नपुग्दै देशका भित्ता भित्तामा पुगिसकेको छ। सुदूर पश्चिमको कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्त प्रकरणमा न्याय माग्न भन्दै बनाइएको पोष्टर प्रहरीले च्यात्न थालेको सार्वजनिक भएपछि त्यसले अधिकारीहरूमाथि पारेको प्रभाव प्रष्ट भएको छ।
खासमा त्यो टोलीलाई एउटा फेसबुक सन्देशले झक्झक्याइदिएको थियो । सन्देश थियो- ‘विवादास्पद’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि काठमाण्डूका ठाउँ ठाउँमा टाँसिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र अन्यका फोटाहरूमाथि निर्मला पन्तको फोटो टाँसेर न्यायका लागि दबाब बढाउने। टोलीले आफ्नै खल्तीबाट पैसा हालेर ३० थान फ्लेक्स २०० पोष्टर बनायो। १८ जनाको टोली काठमाडौं, भक्तपुर र पाटनमा बाँडिएर बिहीवार राती पोष्टर र फ्लेक्स टाँग्न व्यस्त रह्यो। त्यो अधिकारीहरूका लागि टाउको दुखाइ बनिदियो।
पोष्टरमा आकर्षक नारा पनि छ: “सरकार भेटियो तर न्याय भेटिएन”भन्ने। केसीका अनुसार उनी स्वयंले खासमा ‘सरकार भेटियो तर न्याय हरायो’ भन्ने नारा प्रस्ताव गरेका थिए।त्यसमाथि छलफल भएर अन्तिम रुप दिइयो ‘सरकार भेटियो तर न्याय भेटिएन’ भन्ने। पोष्टरहरू सवारी साधनमा टाँसिए। त्यसरी टाँसेका पोष्टरहरू प्रहरीले च्यातेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भए।
प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, “प्रहरीको पोष्टर च्यात्ने नीति होइन आदेश पनि दिएको छैन।” तर गत हप्ता काठमाण्डूमा भएको एक विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका ठूल्ठूला पोष्टरहरू टाँसिएका थिए। ती पोष्टरमाथि अभियानकर्ताहरूले निर्मलाको पोष्टर टाँसिदिएपछि त्यो “अशोभनीय भएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नराम्रो सन्देश जाने भएकाले स्थानीय प्रशासनले त्यो रोक्न खोजेको” प्रवक्ता सुवेदीले बीबीसीलाई बताए।
पोष्टरको स्केचको डिजाइन इन्टरनेटबाट निकालिएको र त्यो स्केच स्कृष्णगोपालले बनाएको उनले बताउ। त्यसैक्रममा “आक्रोशित” अभियानकर्मीलाई पक्राउ गरिएको र पछि छोडिएको उनले बताए। अभियानकर्ताहरू दबाब बढाउन पोष्टर सहित सडकमा आएको बताउँछन् । पोष्टरको माग देशका विभिन्न भागबाट आउन थालेपछि उनीहरूले गुगल ड्राइभबाट सबैलाई डिजाइनमाथि पहुँच दिए। देशभर स्वतस्फूर्त रुपमा सबैले आ-आफै पोष्टर बनाएको केसीले बताए। निर्मलालाई न्याय माग्ने काममा सबैले जिम्मेवारी महसुस गरुन् भनेर पहिले त पोष्टरबारे उनीहरूले कसैलाई बताएनन्।
तर ‘राजनीतिक पार्टीले नियोजित रुपमा गरेको भन्ने जस्ता आरोप आएपछि’ आफूहरू पोष्टरबारे जानकारी सार्वजनिक गर्न तयार भएको केसीले बताए।पोष्टरपछि स्टिकरको माग आउन थाल्यो। आफ्नै खल्तीका पैसा खर्च गरेर २२५ स्टिकर बनाएर उनीहरूले गत शनिवार भृकुटीमण्डपमा भेटघाट आयोजना गरे। स्टिकर, पोष्टर र फ्लेक्स बनाउँदा लागेको खर्च १८ जनाको समूहमा बाँडदा प्रतिव्यक्ति ५३२ रुपैयाँ परेको केसीले बताए। त्यसपछि स्टिकरको माग आयो त्यसलाई पनि उनीहरूले गुगल ड्राइभ मार्फत् बाँडन थाले। आफूहरूले बनाएको स्टिकरले निर्मलालाई न्याय दिने कुरामा दबाब बढाउने माध्यम बनेकोमा आफूहरू उत्साहित बनेको केसीले बीबीसीलाई बताए।
बलात्कार र हत्या
कञ्चनपुरमा एउटी किशोरीको बलात्कार त्यसपछि हत्या भयो। महिलाहरूमाथि यस्ता ज्यादती दैनन्दिन रुपमा धेरै हुने गरेका प्रहरीका रेकर्डले देखाउँछन्। त्यसरी हिंसामा पर्ने धेरै आफ्नो र परिवारको इज्जत जाने डरले अगाडि आउँदैनन्। कति यस्ता केसहरू प्रहरीको मध्यस्थतामा “मिलाउने” गरिएको बताइन्छ। अभियानकर्ताहरू भन्छन्, कति पीडितहरू पीडकहरूको पैसाको थुप्रोका कारण मुख सिलाउँछन्। निर्मला पन्तको काण्ड एउटा त्यस्तो काण्ड बनेर आएको छ जसमा आमा, बाबु र बहिनी सार्वजनिक रुपमै न्यायको माग गरिरहेका छन्। न्याय माग्दै कञ्चनपुर, काठमाण्डू र देशका अन्य भागमा पटक पटक प्रदर्शन र नाराबाजी हुँदै आएको छ।
विरोध प्रदर्शनमा नागरिक समाजका अगुवाहरू समेत सहभागी हुँदै आएका छन्। विरोध गर्नेहरूले गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखको राजीनामा माग्दै आएका छन्। हत्या भएको चार महिना बित्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको तीब्र आलोचना हुँदै आएको छ। निर्मलाका बाबुआमाले धर्ना बसेका छन्। धर्नाकै क्रममा बाबु बिरामी परेपछि काठमाण्डू ल्याएर उनको उपचार भइरहेको छ। बिबिसी सेवावाट
मोदीले नेपालसँग युगौंदेखिको सम्बन्ध बिगारे : लालु
मंसिर १५ । काठमाडौं, भारतका पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालुप्रसाद यादवले भारतीय […]
शर्त उल्लंघन गर्ने स्मार्ट र यूटिएललाई पाँच लाख जरिवाना
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आधारभूत टेलिफोन सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त […]
फागुन २१ ।काठमाडौँ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान निर्माणका क्रममा धेरै कुरामा सहमति भएपनि पनि […]
२ बर्षभित्र नारायणीमा पानीजहाज चल्ने
काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको नेपाली झण्डाबाहक पानी जहाज […]
माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महराको राजीनामा
काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराले अाफुले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राजीनामा दिइसकेको बताएका छन् । संसदीय […]